Kucheka mubhedha yerineni: Zano ane makubhiti 220. Sei kuverenga jira rakawanda?
Akamboenda akatarisana bedclothes pachavo, vanoziva kuti chii, chokutanga, zviri nyore, uye chepiri zviri zvikuru mari pane kutenga, Chechitatu, chete kugutsa kufarira ruvara. Chinhu chikuru kuziva zvimwe kwesayenzi zviri zvikuru chinokosha zvikuru vakaronga kusona, kukwanisa kutora matanho zvakanaka vave dzaona kufungisisa shrinkage uye vazvo uye mukanyatsochengeta kutevedzera mirayiridzo pazasi. Saka, zvose izvi pamwe kupfuura kutema mubhedha yerineni - zano ane makubhiti 220 masendimita (kaviri yakatarwa).
Chii sona linens? Nhasi, pakusarudza zvinhu rakakura kwazvo, hazvishamisi dambudziko rako pakusarudza. Asi ichi zvinokosha zvikuru, nokuti anosarudza kwete chete upenyu mubhedha, asi chinhu chinonyanya kukosha - wako utano uye vakasununguka hope. Ngatimbotaurei zvazviri.
Huru zvinodiwa kuti zvinoshanda zvinhu ndiyo:
nyoro uye inofadza tactile nezvekufadza kuti wakasununguka kuti hope;
jira vanofanira nguva dzose kuitwa dzinongoitika zvinhu regai kukonzera Kurwara, mutambo mapundu (izvo zvinowanzoitwa pamwe muzvinhu zvinogadzirwa nemakemikari nekuti hazvina kufema ganda uye ziya haishaikwi);
zvinofanira kuva nemishonga uye kukurira vakawanda crow, pamwe zvinofanira kuva rinokosha kurukiswa yakapfava kuti utachiona nyore kushambidzwa;
mashoko anofanira vanopupurirwa, ipapo zvose pamusoro zvinodiwa vachatorwa kufungwa, uye linens kubva Mucheka akadaro kuchapedza kwemakore anoverengeka, uye imi hamuna kuda kumirira vanoshamiswa bhowa muchimiro molting, shrinkage kana slezshey kupenda, riri inokanganisa iwe uye utano hwako vadiwa.
Zvino vanogara jira fomu. Most inowanzoshandiswa nokuda zvekufuga donje jira - ndiko Calico, poplin, satin. Vane nyoro uye inofadza kubata, eco ushamwari, rurefu chikumbaridzozve hygroscopic, izvo zvinoreva kuti vari zvakanaka kufungisisa unyoro uye mhepo, saka muviri anofema mavari. Plus twavanopfeka kwemakore 3-4 dzinogara kushandiswa. Chintz nani kwete kusarudza, iye tonkovat kuti zvekufuga uye kakawanda kushandiswa manapukeni mwana.
Len mu yakachena chimiro haawanzopiwi kushandiswa mune zvaAtemisi Mabhokisi nokuda kwayo dzinongoitika noukukutu. Zvisinei, unhu zvakakodzera zvekufuga, nokuda kwazvo thermoregulation. In inopisa ekunze, zviri cool hope, uye jira nokukurumidza runopwa zvakawandisa mwando pasina kunzwa nyoro panguva imwecheteyo, muviri kufema. A dunhu iri yechando zvakanaka uye nokukurumidza rematsutso. Goho - kushandiswa werineni ane admixture nedonje, 50/50 kana 60/40, yokurara yakatarwa dzamutswa sezvo donje, uye vane nzvimbo sezvo yakaisvonaka neshinda. Chokwadi, jira ichi zvichava anodhura pane satin kana Calico.
Chimwe zvinhu kuwedzera kukurumbira inofambidzana Mako satin, ndizvo chaizvo nyoro uye rakasimba, uye ayo akafanana zviri akawedzera Egyptian donje. Zviri akafuma kwazvo siyana-siyana kwerima guru. zvinhu yakadaro yakakodzera zvaAtemisi vepamusoro seti.
Uyewo yakakurumbira andapeni rakagadzirwa yemishenjere ane kubatwa ane 60/40 donje. Izvi zvinopa chaizvo nyoro andapeni, nemhepo, antibacterial, mwando tsime diverter. The chete nuance - chiduku akasiyana-siyana. Yakanaka vaya vanosarudza mucheka, wakagadzikana dzinongoitika palette.
Zvishoma yaiwanzoshandiswa sirika. Asi zviri zvikuru choosy mu kusona, saka zvakakodzera chete ruzivo seamstresses.
Standard Kukura kaviri mubhedha yakatarwa
Kucheka mubhedha yerineni ane makubhiti 220 ine 2 kana 4 mutsago nyaya, machira 1 uye 1 negumbeze butiro uye ane inotevera mureza miganhu:
jira - 220h240 cm;
Duvet - 220h240 cm;
2 pillowcases - 50x70 masendimita kana 70x70.
This Euro mureza, uye vamwe matsime ungawana kusiyana ne kukura izvi ndinoiitawo kana kubvisa 10-20 cm. Panewo mhuri Kits rinosanganisira 2 duvet cover, 2 kana 4 pillowcases uye 1 papepa. Classic kaviri musimboti haripi makubhiti 220 cm.
We ongorora muudzame kutema mubhedha yakarukwa - zano ane makubhiti 220 (euros).
Huwandu zvinyama uye zvinodiwa nezvinhu
We overenga kuyerera jira Matandira ane makubhiti 220 cm.
machira Length = 240 masendimita ± 5 masendimita (undercut) = 245 cm.
Pamucheka pabutiro urefu = masendimita 240 X 2 + 5 masendimita divi iri vazvo uye undercut = 485 cm.
Tinotarisira pillowcases, 2 zvidimbu (50x70 kutora European mureza). At 220 masendimita padandemutande upamhi chete aenderane 4 X 50 masendimita + 5 masendimita X 2 kushivirira, kureba nezvifukidzo edu. Zvadaro, avo upamhi iri metered pasi - a 70 cm X 2 cm X 5 + 2 + dzichashivirira 20 cm pamusoro jira run. Somugumisiro, vanofanira kuwana rimwe jira rakareba kukura 210h170, izvo isu kugovera hafu.
Total nokuveza mubhedha yerineni (zano) ane makubhiti 220 masendimita zvinoda 245 + 485 masendimita + 170 masendimita pakureba akasanganiswa 900. cm. Plus iwe unenge uchida mheni, bhatani kana mabhatani kuti negumbeze viomak. Iva nechokwadi kuti kushandisa unhu paukobvu simba shinda.
Attention, asati kusona akatenga jira anofanira kusuka, akaomeswa uye ironed simbi kuti zvishoma, "akagara pasi", zvimwe iwe kumhanya mukana disproportionate andapeni.
Zvino mberi zvakananga kusona, dunhu kucheka mubhedha yerineni kana makubhiti 220 iri kukurukurwa pazasi.
Sezvo Mucheka kuva makubhiti 220 cm upamhi jira wagadzirirwa asi iwe unogona kumbomira uye mupendero sendimita kubva kumucheto nokuti nani aesthetic chitarisiko. Zvino refu - Unoyera kubva masendimita 240 ± 5 masendimita upamhi pamusoro kushivirira. zvikamu kumucheto vokutanga kubatwa rakazaruka overlock Musono kana kunzvenganzvenga. Zvadaro anokotama navo pamativi ose 2 cm, proutyuzhivaem kuti zvive nyore kuti kusona, uye kure ane millimeters shoma kubva kumucheto kuita decoration mutsetse. Saka anotarira kutema zvekufuga (upamhi 220) - zano nokuda machira. Bvumiranai, hapana kunzwisisa.
Zvikuru nedambudziko iri imwe nzira.
Kana uchida kuita kuti machira ane kwakavharwa nenyama bhendi, dunhu kucheka mubhedha yerineni ane makubhiti 220 vaizova sezvinotevera:
jira urefu = urefu + Kukwirira metiresi metiresi kane 2 + 3 masendimita panguva vazvo (semuenzaniso, 210 masendimita + 15 masendimita + 3 x 2 cm);
upamhi machira - upamhi uye kureba metiresi metiresi kuwanda maererano + 3 masendimita panguva vazvo (200 masendimita + 15 masendimita + 2 x 3 cm).
Maka kumusoro Kureba Pepa 210 masendimita uye kukwirira masendimita 18 kurutivi rumwe norumwe. Next unofanira kuita kureba pamabhokisi ari muchimiro, izvo achaurawa pane metiresi. Nokuti chinangwa ichi isu kubviswa panguva kukwirira zvakawandisa zvinhu, vachisiya masendimita 210 chete + 1,5 masendimita upamhi kurutivi rumwe norumwe ari musono. Kusona pamucheto miviri musono. Tinowana bhokisi metiresi.
Zvino unofanira tibve nomumwe pamucheto nerimwe divi masendimita 20 uye kuti serifs. Uyezve chingamu atora 4 uye 60 cm iri vaisona kuti micheto serifs izvi. Zvadaro ugopfiga chingamu rinenge uye vasonanidza ari mupendero kuitira kuti vatadzire chingamu. Machira wakagadzirira!
Izvi zvinoteverwa zvamakaparadza yerineni - redunhu ane makubhiti 220 kusvika negumbeze viomak. Mucheka, yatiri akayera kuti negumbeze pakavha (ndiko 240 + 2 cm X 5 masendimita ari Kushivirira vanosvika 480 cm), tinoisa chaicho hafu uye kaviri musono kusona 2 divi. A kuchengeterwa vpravki magumbeze. Zvakanakisisa kutora pasi uye dzinoona chikamu rakazaruka kana namahwindo pamusoro musono iri mupendero.
Unogona kushandisa nekiyi, kiyi, mabhatani nokuti nokuvhara chikamu ichi kuti iwe uchava wakasununguka. Izvi European mureza nokuveza zvekufuga (zano ane makubhiti 220). Family yakatarwa inoda kazhinji maviri duvet cover vari kukura 160h220 masendimita ukuwo, muchiitiko ichi, uye yardage, kuzvicherera uye vachatarira zvakasiyana.
On piro inoda 210h150 chidimbu yakakamurwa hafu (i.e., 2 X 105h75 cm).
Scheme kucheka zvekufuga (upamhi 220) kuti nezvifukidzo 50x70 inotevera. Yakafara masendimita 70 + 70 cm + 5 masendimita (mugove) + masendimita 20 (yacho), kureba masendimita + 50 masendimita kuti 5cm ngaabvumire 50.
Back pasi refu rutivi 2cm decoration hemming Musono, ipapo shure kusvika 70 cm, anokotama, riri vasonanidza mumativi kubva yomukati divi kaviri musono. Zvadaro zvakare, kuita vanobwembura pamusoro masendimita 20 uye chete kubata nayo mupendero kumativi ose. Mugumisiro aiva pillowcase ane vanobwembura.
Mushure linens vasonanidza, zvinofanira zvakare kamwe kushambidzwa soapy mvura inodziya uye simbi simbi kumativi ose.
Sezvaunogona kuona, bedclothes pachako - kwete yakaoma chaizvo urongwa. Izvi zvinobatsira, nyore, inexpensive, uye iwe unogona kushandisa chero muridzi ane musha Machine overlock stitching kana "kunzvenganzvenga". Chikurukuru, kodzero kuita kuyerwa zvose, kuti Stock kumusoro-unhu zvinhu, uye mwoyo murefu, uye vanotevedzera muenzaniso ino.
Nomusoni pamusoro piro pamuchinjikwa: vanoronga
Korona yakanaka muchindakadzi, nemaoko ake akaita
How kuti chepiramidhi, kana chinoshamisa rechinomwe nyika kumba?
How kuti boka Chocolates nemaoko avo. kirasi kuti beginners tenzi
Crafts kubva shinda: zvizhinji zvaungasarudza!
Ndiro pamusoro mabhanana - zvinonaka uye utano
Photos pamusoro Corporate Kana Sei We Mhizha?
Ndiani mealworm, sei kubvisa naye
Pfupiso yebhuku Belkin "The vakapfura" Pushkin AS
Izvozvo zvakanakira HDMI adapter is tulip iyo isiri maruva
Digital chiratidzo - yakamboita, kuvimbika, kuchengeteka
Mayonnaise asina mazai pamba: maitiro anoedza kupfuura ose
Recipe zvishoma nezvishoma kugadzirira keke "Tomasi Tank Engine"
How kuti remuti tsime nemaoko ako?
The dzinoti "Black Rudo": dzakatevedzana kugutsikana
Kadhi rechikwereti kubhengi sei?
Marwadzo mutemberi kuruboshwe kana kurudyi: zvinogona kureva? Throbbing marwadzo mutemberi: Zvinokukonzera uye Yemakwenzi marwadzo